Ry rahalahy, tsy tokony ho izany no lazaina momba antsika. Amin’ny maha-lehilahy mpihazona ny fisoronana antsika dia manana anjara toerana manan-danja isika eo amin’ny fiaraha-monina, sy ao an-tokantrano ary ato am-piangonana. Kanefa mila tonga lehilahy azon’ireo vehivavy hatokisana isika, azon’ireo zanaka hatokisana ary azon’Andriamanitra hatokisana. Tsy afaka isika ny hamela ny hisian’ireo zatovolahy sy lehilahy tsy mandray andraikitra ato amin’ny Fiangonana sy fanjakan’Andriamanitra amin’izao andro farany izao. Tsy afaka isika ny hamela ny hisian’ ireo zatovolahy izay tsy manana fifehezan-tena ary miaina araka izay mahafinaritra ny sainy fotsiny. Tsy afaka isika ny hamela ny hisian’ireo tanora lehilahy izay tsy mba manana tanjona eo amin’ny fiainana, izay tsy mandray am-pahamatorana ny fanorenana fianakaviana sy ny fandraisan’anjara feno eto amin’ity izao tontolo izao ity. Tsy afaka isika ny hamela ny hisian’ireo vady sy raim-pia-nakavian